ỊWỤNYE NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA NA SONY VAIO - ISIOKWU - 2019
Laptọọpụ 03/03/2013 | dị iche iche | usoro
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile na Sony Vaio laptọọpụ bụ ọrụ na-adịghị mkpa nke ndị ọrụ na-eche ihu. Enyemaka - ọtụtụ isiokwu na-akọwa maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka nsogbu, nke, ọ dị mwute ịghara ịrụ ọrụ mgbe niile.
N'ozuzu, ọ dị mkpa ịchọta na nsogbu ahụ bụ maka ndị ọrụ Russia - mgbe ị na-azụta laptọọpụ, ọtụtụ n'ime ha na-ebu ụzọ kpebie ihichapụ ihe niile, gbanwee ya (gụnyere mpaghara mgbake nke laptọọpụ) ma wụnye Windows 7 Oke karịa Home. Uru nke ihe omume dị otú ahụ maka onye ọrụ ọhaneze na-enwe obi abụọ. Nhọrọ ọzọ na-adịbeghị anya bụ na mmadụ mere ntinye dị ọcha nke Windows 8 na laptọọpụ Sony Vaio, ọ gaghị enwe ike ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala (enwere ntụziaka dị iche na esi esi wụnye Windows 8 na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti Sony ma chọpụta na enweghị nhazi ọcha).
Okwu ọzọ: "nna ukwu" na-arụ ọrụ nhazi kọmputa na-abata ma mee otu ihe ahụ na Sony Vaio - nkeji mmepụta ụlọ ọrụ na-ewepu, na-etinye mgbakọ a la Zver DVD. Nsonaazụ mbụ bụ enweghị ike ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile dị mkpa, ndị ọkwọ ụgbọala adịghị adabara, ndị ọkwọ ụgbọala ahụ nwere ike ibudata na ebe nrụọrụ weebụ Sony ọrụ adịghị arụnyere. N'otu oge ahụ, igodo arụ ọrụ nke laptọọpụ adịghị arụ ọrụ, nke na-ahụ maka ịbawanyewanye ọkụ na olu, na-ekpochi touchpad na ọtụtụ ndị ọzọ abụghị ọrụ doro anya ma dị mkpa - dịka ọmụmaatụ, njikwa ike nke Sony laptọọpụ.
Ebee ibudata ndị ọkwọ ụgbọala maka Vaio
Ndị ọkwọ ụgbọala VAIO na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti Sony
Ndị ọkwọ ụgbọala na-acho maka ngwa laptọọpụ gị nwere ike ịnwe na ebe nrụọrụ weebụ Sony na ngalaba "Nkwado" na ebe ọ bụla ọzọ. Ị chọpụtala na ọ bụghị ibudata faịlụ ndị dị na saịtị Russia, na nke a ị nwere ike ịgakwuru ndị ọ bụla nke Europe - faịlụ nbudata onwe ha abụghị iche. Ugbu a, sony.ru anaghị arụ ọrụ, n'ihi ya, m ga-egosi ya na ihe atụ nke saịtị maka UK. Gaa sony.com, họrọ ihe "Nkwado", na onyinye nke ịhọrọ mba, họrọ ihe achọrọ. Na ndepụta nke ngalaba, họrọ Vaio and Computing, wee Vaio, mgbe ahụ Notebook, wee chọpụta larịị chọrọ. N'okwu m, nke a bụ VPCEH3J1R / B. Họrọ Akpa Downloads na n'elu ya, na Ngalaba Ọkwọ ụgbọala na Mmasị ndị Kwesịrị Ekwesị, ịkwesịrị ibudata ndị ọkwọ ụgbọala na ihe niile dị na kọmputa gị. N'eziokwu, ọ bụghị ha niile dị mkpa. K'anyị nọrọ na ndị ọkwọ ụgbọala maka ihe nlereanya m:
VAIO Ndenye ngwa ntanetị A na-eme ụdị ụdị ọrụ ntanetị nke na-agụnye otu ihe nchọgharị ma ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ WEB na laptọọpụ arụmọrụ (Windows adịghị amalite n'otu oge ahụ). Mgbe diski diskichara zuru oke, arụ ọrụ a nwere ike weghachite, mana agaghị m emetụ aka na usoro a na isiokwu a. I nweghị ike ibudata ma ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa.
LAN Driver (Intel) Ọkwọ ụgbọala Wi-Fi. Ọ ka mma ịwụnye, ọbụlagodi na Wi-Fi kpebiri na-akpaghị aka.
Atheros Bluetooth® Adapter Ọkwọ ụgbọala Bluetooth. Download
Igwe Ngosipụta Igwefụụ Ikuku Bluetooth Onye na-akwọ ụgbọala maka ijikọ ihe nyocha n'enweghị wires site na iji teknụzụ Wi-Di. Mmadụ ole na ole dị mkpa, ị pụghị ibudata.
Ntughari ihe ọkwọ ụgbọala na ngwaọrụ (ALPS) Ọkpụkpọ Touchpad. Tọọ ma ọ bụrụ na ị na-eji ya ma chọọ njirimara ọzọ mgbe ị na-eji ya.
Ngwa ngwa ngwa Sony Notebook Ngwa ndị a kwadoro maka laptọọpụ Sony Vaio. Njikwa ikike, igodo obi. Ihe dị mkpa, jide n'aka na ibudata.
Ọkwọ ụgbọala ọkpụkpọ Ndị ọkwọ ụgbọala maka ụda. Anyị na-ebu ibu, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ụda olu na ya.
Nyocha Ethernet Ọkwọ ụgbọ ala netwọk. A chọrọ.
SATA Ọkwọ ụgbọala Ọkwọ ụgbọ ala SATA. Mkpa
ME Driver Intel Management Engine Driver. A chọrọ.
Realtek PCIE CardReader Ọgụgụ kaadi
Vaio na-elekọta Ibu ọrụ sitere na Sony, na-edekwa ahụ ike nke kọmputa ahụ, na-akọ banyere imelite ndị ọkwọ ụgbọala. Ọ dịghị mkpa.
Chipset ọkwọ ụgbọ ala Download
Onye na-eme ihe nkiri Graphics Graphics Intel HD Embedded Graphics Driver
Nvidia Graphics Driver Ọkwọ ụgbọ ala vidiyo (ihe ngosi)
Sony Shared Library Ọchịchị ọzọ achọrọ n'aka Sony
SFEP Ọkwọ ụgbọalaACPI SNY5001 Sony Firmware Extension Parser Driver - ọkwọ ụgbọala kachasị nsogbu. N'otu oge ahụ, otu n'ime ihe ndị kacha mkpa - na - eme ka ọrụ nke ọrụ Sony Vaio rụọ.
Network Smart Network Uru maka ijikwa njikọ netwọk adịghị oke mkpa.
Ebe nchekwa ebe nchekwa Ọ bụghịkwa ọrụ kachasị mkpa.
Maka ihe nlereanya laptọọpụ gị, njikwa nke ndị ọrụ na ndị ọkwọ ụgbọala ga-abụrịrị dị iche, mana isi ihe ndị e gosipụtara na obi ike ga-adị otu, ha dị mkpa maka Sony Vaio PCG, PCV, VGN, VGC, VGX, VPC.
Esi arụnye ndị ọkwọ ụgbọala na Vaio
Mgbe m na-emekpa m ahụ site n'ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka Windows 8 na laptọọpụ m, ana m agụ ọtụtụ ntụziaka banyere usoro ziri ezi nke ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na Sony Vaio. Maka ihe nlereanya ọ bụla, usoro a dị iche iche ma ị nwere ike ịchọta ozi dị otú ahụ n'ụzọ dị mfe na mkparịta ụka nke isiokwu a. Site na onwe m, m nwere ike ikwu - anaghị arụ ọrụ. Na ọ bụghị naanị na Windows 8, kamakwa mgbe ị na-etinye Windows 7 Home Basic, nke bịara na laptọọpụ, ma ọ bụghị site na mgbake mgbidi. Otú ọ dị, edozi nsogbu ahụ n'enweghị usoro ọ bụla.
Ihe ngosi vidiyo: wụnye ACPI SNY5001 Driver Driver Unknown
Video on how installers from Sony are unpacked, na mpaghara na-esote, na-esote vidiyo - ntụziaka zuru ezu maka ndị ọkwọ ụgbọala niile (mana ihe pụtara na vidiyo).
Ntuziaka maka nhazi ndị ọkwọ ụgbọala dị mfe na nke ọma na Vaio site na remontka.pro
Onye ọkwọ ụgbọala adịghị arụnye:
Nzọụkwụ otu. Na nke ọ bụla, wụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile ebudatara na mbụ.
Ọ bụrụ na laptọọpụ mgbe ịzụrụ bụ Windows 7 (ọ bụla) ma ugbu a Windows 7:
Gbaa faịlụ nwụnye, ma ọ bụrụ na arụnyere ihe niile nke ọma, regharịa kọmputa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, kwụpụ faịlụ ahụ, dịka ọmụmaatụ, na folda ahụ arụnyere, gaa n'ihu.
Ọ bụrụ na n'oge echichi ozi gosipụtara na enweghi ihe ngwanro a maka kọmputa a ma obu nsogbu ndi ozo, ya bu. A naghị arụnye ndị ọkwọ ụgbọala, anyị na-atụgharị faịlụ na-adịghị arụnye, dịka ọmụmaatụ, na nchekwa "Adịbeghị" Gaa na ntinye nke faịlụ ọzọ.
Ọ bụrụ na ịzụrụ bụ Windows 7, ma ugbu a, anyị na-etinye Windows 8 - ihe niile bụ otu maka ọnọdụ mbụ, mana anyị na-agba ọsọ niile faịlụ na ọnọdụ nkwado na Windows 7.
Nzọụkwụ abụọ. Ọfọn, ugbu a isi ihe bụ ịwụnye SFEP ọkwọ ụgbọala, Sony Notebooks Utilities na ihe ọ bụla ọzọ jụrụ ajụ.
Ka anyị jiri ihe siri ike malite: Sony Firmware Extension Parser (SFEP). Na njikwa ngwaọrụ, ọ ga-ebinyere "Unknown device" ACPI SNY5001 (nọmba ndị maara nke ọma maka ọtụtụ ndị nwe Vaio). Chọọnụ maka onye ọkwọ ụgbọ ala ya n'ụdị faịlụ .inf dị ọcha, ma eleghị anya ọ ga - enye ya. Onye nchịkọta si na saịtị ahụ na-arụ ọrụ anaghị arụ ọrụ. Kedu ka esi eme?
Nbudata ihe bara uru bu ihe oma ma obu Universal Extractor. Usoro ihe omume ahụ ga-enye gị ohere ịmepụ onye ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ na wepụ faịlụ niile dị na ya, tụfuo scanners na-enweghị isi site na Sony, ndị na-ekwu na enweghị kwadoro laptọọpụ anyị.
Chọta faịlụ onye ọkwọ ụgbọala maka SFEP na folda ya na faịlụ ahụ nwụnyeghị .inf, wụnye ya site na iji Task Manager na "Ngwaọrụ Unknown". Ihe nile ga ebili dika o kwesiri.
Chekwaa ọkwọ ụgbọala SNY5001 na folda ahụ
N'ụzọ yiri nke ahụ, mechie faịlụ ndị ọzọ nwụnye na achọghị ka arụnyere. Anyị na-achọta dị ka "nsonaazụ dị ọcha" ihe dị mkpa (ya bụ, ihe ọzọ exe faịlụ na folda ahụ gbanwee) ma wụnye ya na kọmputa ahụ. O kwesiri iburu n'uche na Sony Notebook Utilities nwere nani atumatu di iche iche di iche iche bu ndi oru maka oru di iche iche. Mmadụ atọ ga-anọ na folda ahụ na-enweghị ike, ha ga-achọkwa ka a rụnye ha iche iche. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, jiri ọnọdụ ndakọrịta na Windows 7.
Nke ahụ niile. N'ihi ya, m jisiri ike wụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile Sony Sony VPCEH ugboro abụọ - maka Windows 8 Pro na maka Windows 7. Igodo nke na-egbuke egbuke na igodo olu, ọrụ ISBMgr.exe, bụ ọrụ maka ike na njikwa batrị, na ihe ọ bụla ọzọ na-arụ ọrụ. Ọ gbanwekwara na ịlaghachi VAIO Quick Web Access (na Windows 8), mana echeghị m kpọmkwem ihe m mere maka nke a, ma ugbu a, enweghi m umengwụ iji megharịa.
Ihe ọzọ: Ị nwekwara ike ịnwa ịchọta onyinyo nke ngalaba mgbake maka ọdịdị Vaio gị na torrent tracker rutracker.org. Enwere ha zuru ebe ahụ, ịnwere ike ịchọta nke gị.
MLC, TLC ma ọ bụ QLC - nke ka mma maka SSD? (yana V-NAND, 3D NAND na SLC)
Laptọọpụ kacha mma 2019